चीन इलेक्ट्रीकल बाइकलीहरू तल राइड गर्नुहोस्। के म एउटा ब्याटरी थप्न सक्छु? निर्माण र कारखाना | Lenda
शहर बाइक बाइक
डच बाइक बाइक
Kids बाइक बाइक
ब्यालेन्स बाइक बाइक
माउन्टेन बाइक-ई बाइक
सस्पेन्सन बाइक-ई बाइक
शहर बाइक-ई बाइक
ट्र्याकिंग बाइक-ई बाइक
बीच बाइकeबाइक
Mini Road-e बाइक
फोल्डिंग बाइक-ई बाइक
इलेक्ट्रीक बाइसाइकलहरू तल राइड गर्नुहोस्। के म एउटा ब्याटरी थप्न सक्छु?
भर्खर, एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोगकर्ताले यस्तो प्रश्न उठायो: मैले भर्खरै खरीद गरेको इलेक्ट्रिक साइकल धेरै ढिलो छ। के म यसलाई छिटो बनाउनको लागि ब्याट्री थप्न सक्छु? यस प्रश्नको लागि, मोटो-टेक कम्पनीको बिक्रिको टेक्निकल सेवा समूहको उत्तर यो हो कि चार मुख्य कारणका लागि ब्याट्रीहरू थप्न सम्भव छैन।
पहिले, ब्याट्री बक्स आकार सीमा, नयाँ ब्याट्रीहरू थप्न सक्दैन
सबैलाई थाहा छ ब्याट्री सावधानीपूर्वक डिजाइन गरीन्छ उनीहरूले कारखाना छोड्नु भन्दा पहिले ब्याट्री बक्सको साइज सहित। जब ब्याट्री बनेको हुन्छ मात्र मिलाउने कारणले त्यहाँ चुहावट हुँदैन। V 48V इलेक्ट्रिक साइकललाई उदाहरणको रूपमा लिनु, यो चार १२V सानो ब्याट्री मिलेर बनेको छ, र ब्याट्री बक्समा small साना ब्याट्रीहरू मात्र समावेश गर्न सकिन्छ। नयाँ ब्याट्रीहरू थप्न सम्भव छैन।
दोस्रो, इलेक्ट्रिक सवारीको लागि नयाँ राष्ट्रिय मानक प्रतिबन्धित छ, र नयाँ ब्याट्रीहरूको साथ विद्युतीय साइकलहरू आफैंमा सडकमा हुन सक्दैन।
नयाँ राष्ट्रिय मानकमा, इलेक्ट्रिक साइकलको ब्याट्री V 48V भन्दा बढी हुन सक्दैन। यदि प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ ब्याट्रीहरू थप्न चाहान्छन्, तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा नयाँ राष्ट्रिय मानक पूरा गर्दैनन्, र त्यस्ता इलेक्ट्रिक सवारीहरूलाई गैर-मानक वाहनहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ। यदि प्रयोगकर्ताले इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका भए पनि, त्यस्तो इलेक्ट्रिक वाहनले अझै पनि सही अधिकारको मजा लिन सक्दैन, जुन एक अवैध परिमार्जन हो। हुनसक्छ धेरै व्यक्तिले भन्न चाहान्छन्, के तपाई यस प्रकारको कारलाई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्नुहुन्छ? उत्तर होईन। त्यसकारण, यस बिन्दुबाट, इलेक्ट्रिक साइकल ब्याट्रीहरूको साथ चार्ज गर्न सकिँदैन।
तेस्रो, ब्याट्रीविना इलेक्ट्रिक साइकल असफलताको दर अधिक छ
सिद्धान्तमा, इलेक्ट्रिक साइकल बिस्तारै सवारी गर्दछ, र ब्याट्री थपेमा उनीहरूलाई छिटो बनाउन सकिन्छ। जहाँसम्म, व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट, ब्याट्री थपेमा मोटर वा कन्ट्रोलर जल्नेछ, इलेक्ट्रिक साइकलको विफलता दर बढ्यो। यसको मतलब यो छ कि यदि ब्याट्री थप गर्नुपर्दछ भने मोटर र कन्ट्रोलर बदल्नु पर्छ र मेल खानु पर्छ। यस दृष्टिकोणबाट, ब्याट्री थपेको नाफाहरू फाइदाहरू भन्दा बढी हुन्छ, र लागत ज्यादै बढी छ, त्यसैले तपाईं ब्याट्री थप्न सक्नुहुन्न।
चार, इलेक्ट्रिक साइकलले अनुमति बिना ब्याट्री थप सुरक्षा जोखिम बढी छ
यो मुख्यतया दुई पक्षहरु मा प्रतिबिम्बित छ। पहिले, निजी रूपमा थपिएको ब्याट्रीहरूको साथ इलेक्ट्रिक साइकलको नराम्रो स्थिरता र अधिक जोखिमहरू छन्। दोस्रो, ब्याट्री थपिएको इलेक्ट्रिक साइकल निर्माताको तीन ग्यारेन्टीको दायरा भित्र हुँदैन। यदि इलेक्ट्रिक सवारीसँग समस्या छ भने, ती आफ्नै खर्चमा मात्र समाधान गर्न सकिन्छ। यसैले, इलेक्ट्रिक साइकल बिस्तारै सवारी गर्दछ, र ब्याट्री थपेमा काम गर्दैन।
संक्षिप्तमा, वातावरणीय उच्च-टेक उत्पादनहरू विकास गर्नु सधैं मोटरो-टेक कम्पनीको मुख्य फोकस क्षेत्रहरू हुन्। इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू, ई-बाइकहरू, होभरबोर्डहरू र स्केटबोर्डहरूका लागि डिजाईन, निर्माण र मार्केटि inमा विशेषज्ञता लिनुहोस्। यी चार पोइन्टहरूबाट, इलेक्ट्रिक साइकल पनि गतिमा ढिलो, ब्याट्रीहरू थप्न सक्दैन। वास्तवमा, प्रयोगकर्ताहरूले ब्याट्रीहरू थप गरेर गति बढाउनु आवश्यक पर्दैन। हालको बजार अवस्थाको आधारमा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल र इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलहरू सडकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पोष्ट समय: अप्रिल २ 23-२०२०
इलेक्ट्रीक बाइसाइकलहरू तल राइड गर्नुहोस्। म थप्न सक्छु ...
LET स्कूटरहरू कामका घण्टा
टियांजिन एयरपोर्ट आर्थिक क्षेत्र
हामीलाई अब कल गर्नुहोस्: + +86१15२२०१०१7